Umzimveliso weoyile yeoyile yaseLwandle, abaxhasi - Abavelisi baseHoseyini baseHosey
Ulwakhiwo kunye nezixhobo eziphambili zeCarass Main Lining / Tube yangaphakathi: I-Smooth, ioyile kunye ne-oyile enganyangekiyo engenamthungo kunye ne-Acrylontrile Butadiene Rubber (NBR); Uluhlu lwokhuseleko: ulwakhiwo olukhethekileyo ukunqanda iziphene okanye umonakalo owenziwe kukuqhekeka okanye ukonakala kwempahla engaphezulu; Ukuqiniswa kwakhona: IiPlies ezininzi zeTensile ephezulu yeTensile. Inxalenye yomnatha wocingo lwentsimbi yomzimba. Isidumbu esingatshatanga kunye nesiCiko esingaphandle seCarcass Carass: Smooth black, Synthetic Rubber Resistant to Abrasion, ...
Ukuhamba ngombhobho ophambili waselwandle ngeeCollars
Ulwakhiwo kunye nezixhobo eziphambili zeCarass Main Lining / Tube yangaphakathi: Smooth, oyile kunye nefutha enganyangekiyo engenamthungo kunye ne-Acrylontrile-Butadiene-Rubber eyandisiweyo (NBR); Uluhlu lwokhuseleko: ulwakhiwo olukhethekileyo ukunqanda iziphene okanye umonakalo owenziwe kukuqhekeka okanye ukonakala kwembonakalo yelinig ephambili; Ukuqiniswa kwakhona: IiPlies ezininzi zeTensile ephezulu yeTensile. Inxalenye yomnatha wocingo lwentsimbi yomzimba. Isidumbu esingatshatanga kunye nesiCiko esingaphandle seCarcass Carass: Smooth black, Synthetic Rubber Resistant to Abrasion, O ...
Ulwandle lwaselwandle ngombhobho omnye Ukuphelisa ukuqiniswa
Ulwakhiwo kunye nezixhobo eziphambili zeCarass Main Lining / Tube yangaphakathi: Smooth, oyile kunye nefutha enganyangekiyo engenamthungo kunye ne-Acrylontrile-Butadiene-Rubber eyandisiweyo (NBR); Uluhlu lwokhuseleko: ulwakhiwo olukhethekileyo ukunqanda iziphene okanye umonakalo owenziwe kukuqhekeka okanye ukonakala kwembonakalo yelinig ephambili; Ukuqiniswa kwakhona: IiPlies ezininzi zeTensile ephezulu yeTensile. Inxalenye yomnatha wocingo lwentsimbi yomzimba. Isidumbu esingatshatanga kunye nesiCiko esingaphandle seCarcass Carass: Smooth black, Synthetic Rubber Resistant to Abrasion, ...
Isiphelo esinye esiQinisekisiweyo soMbhobho woLwandle oLwandle ngeeCollars
Ulwakhiwo kunye nezixhobo eziphambili zeCarass Main Lining / Tube yangaphakathi: Smooth, oyile kunye nefutha enganyangekiyo engenamthungo kunye ne-Acrylontrile-Butadiene-Rubber eyandisiweyo (NBR); Uluhlu lwokhuseleko: ulwakhiwo olukhethekileyo ukunqanda iziphene okanye umonakalo owenziwe kukuqhekeka okanye ukonakala kwembonakalo yelinig ephambili; Ukuqiniswa kwakhona: IiPlies ezininzi zeTensile ephezulu yeTensile. Inxalenye yomnatha wocingo lwentsimbi yomzimba. Isidumbu esingatshatanga kunye nesiCiko esingaphandle seCarcass Carass: Smooth black, Synthetic Rubber Resistant to Abras ...
Umbhobho weoyile eyi-50m
Ithumbu le-Dock / Cargo yeoyile yesicelo Ithumbu leoyile lenzelwe ubomi obuninzi benkonzo kwimveliso yepetroleum kunye nokudluliswa kwamafutha okucoca ukuya kuthi ga kuxinzelelo lwenkonzo yePSI engama-300. Olu luyilo lwethumbu lwedokodo luyingenelo apho uxinzelelo oluphezulu lokusebenza okanye udonga olunzima lokurhabaxa lufunwa. Ii-dock hoses ziyimisebenzi enzima yokutsala kunye nokukhutshwa kwethumbu eyilelwe ukudlulisa phakathi kweebarger, iitanki zokugcina kunye neenqanawa zaselwandle. Ezi mibhobho zibandakanya ityhubhu eyenzelwe ngokukodwa ukuxhathisa imithombo yeendaba ukuya kwi-50-100% ye-conten enamakha ...
11.8m Umbhobho weoyile yeoyile
I-Dock / Cargo i-hose hose Dock Oil Transfer Transfer Ukwakhiwa: iTyhubhu: Mnyama, igudile, irabha yokwenziwa kweNitrile, efanelekileyo ukuya kuthi ga kwi-50% yesiqulatho esimnandi. Ukuqiniswa: Phindaphinda umsebenzi onzima womtya wentambo oxhaswe ngocingo lwe-helix, iintambo ezichasayo. Uqweqwe: Umnyama, ugqityiwe, irabha eyenziweyo ye-abrasion ephezulu, i-ozone kunye nokumelana nemozulu. Ubushushu obulungeleyo: -40 ℃ ukuya ku-100 ℃ (180 ℉) Into yoKhuseleko: 5: 1 I-Dock yeoyile yokuTshintshela i-Hose yeempawu: I-C / W i-flanges eyakhelwe-ngaphakathi kwicala elinye elihleliweyo kunye necala elinye ...